ဒီဖန်ဘူးလေးထဲမှာ ရေကိုထည့်ပြီး ရေထဲကို အမွှေးဆီ အနည်းငယ် ရောထည့်ပြီး လျှပ်စစ်နဲ့ အပူပေးလိုက်တဲ့အခါ ဘူးထဲက ရေနွေးငွေ့တွေ ထွက်လာပြီး အခန်းထဲကလေတွေကို အနံ့အသက်ဆိုးတွေ ကင်းစေကာ ခပ်ဖျော့ဖျော့လေး အမွှေးရနံ့ပေးပါလိမ့်မယ်။
Brother အမှတ်တံဆိပ် HL-2170 လေဆာပရင်တာဟာ 14.5'' x 14.2'' x 6.7'' အရွယ်အစား ရှိပါတယ်။ အလေးချိန်က ၁၂ ဒသမ ၈ ပေါင်ရှိပါတယ်။
Epson LQ 300 - 202,000 KsHP Laserjet 1213 - 360,000 KsHP Laserjet 1003 - 115,000 KsHP Laserjet 1522 NAIO - 395,000 KsCannon PIXMA - 47,000 KsCannon Laserjet 3050 - 111,000 KsHP Deskjet 2410 - 65,000 KsEpson Stylus T 11 - 50,000 Ks
တွဲဖက်ညီတဲ့ အင်္ကျီနဲ့ စကတ်
အင်္ကျီရောစကတ်ပါ ပိုးသားနဲ့ ချုပ်ထားတာပါ။ အင်္ကျီမှာ ဖန်စီကျောက်လေးတွေကို ကြယ်သီးတွေအဖြစ် သုံးထားပြီး အလှ ဆင်ထားပုံက တစ်မျိုး ကြည့်လို့ကောင်းနေပါတယ်။ အင်္ကျီကအဖြူ၊ အနက်၊ ခရမ်း၊ မိတ်ကပ်ရောင်ဖျော့နဲ့ မဲနယ်ရောင် ဆိုပြီး ငါးမျိုးကြိုက်တဲ့ အရောင်ကိုရွေးလို့ ရပါတယ်။ အင်္ကျီ က တစ်ထည်ကို ၁၂၅၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး စကတ်ကလည်း ကျပ် ၁၂၅၀၀ ဈေးပါပဲ။ Ce-ntral Supermarket မှာ ဝယ်လို့ရပါတယ်။
သဘာဝပုံရိပ်အရည်အသွေးအတိုင်း ခံစားမှုပေးနိုင်တဲ့ LG တီဗွီ
LGရဲ့ 42PQ60R တီဗွီဟာ High Definition HD Ready ဖြစ်လို့ ကြည်လင်ပြတ်သားလှတဲ့ ပုံရိပ် အရည်အသွေးကို ကြည့်ရှုခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။Resolution u 1365 x 768 (50'') နဲ့ 1029 x 768 (42'') ဖြစ်လို့ ပုံရိပ်တွေ သဘာဝအတိုင်း ရှင်း လင်းပေါ်လွင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Dynamic Contrast Ration ကလည်း 200000 : 1 ရှိတော့ အရောင်ကွဲပြားခြား နားမှု ပြတ် သားပေါ်လွင်ပြီး ပုံရိပ်ထွက် ကောင်းမှုကို အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ အရှိန်မြန်မြန်နဲ့ ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ပုံရိပ် တွေကို ရှင်းလင်းစွာ မြင် နိုင်ရဖို့အတွက် 600 Hz Sub Field Driving ပါပါ တယ်။ တီဗွီထားတဲ့အခန်းရဲ့ အလင်း အမှောင်ကိုလည်း ထည့်တွက်စရာ မလိုအောင် Intelligent Sensor ထည့် ထားပေးပါတယ်။ စွမ်းအင်ချွေတာတဲ့ စနစ်ကိုလည်း သုံးထားပါတယ်။ လေး ဘက်လေး တန်ကလာတဲ့ သဘာဝအသံ တွေလိုမျိုး အသံတွေ ထွက်ပေါ်စေတဲ့ စနစ်ပါရှိပါတယ်။ ကြည်လင်ပြတ်သား တဲ့အသံတွေ နားထောင်နိုင်ဖို့ Clear Voice နည်းပညာ သုံးထားပါတယ်။ ဘောင်အကွပ်မပါတဲ့ မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း (Framless Plasma) ပါ။ HDMI ပါရှိပြီး USB 2.0 ပါပါတယ်။ ကွန်ပျူ တာမော်နီတာအဖြစ်လည်း ချိတ်ဆက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ LG42 PQ60R Plasma TV တစ်လုံးရဲ့ ဈေးနှုန်းက ကျပ် ခုနစ် သိန်းလေးသောင်းကိုးထောင်ဖြစ်ပြီး LG အရောင်းပြခန်းတွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။
1. LG 42 PQ 20 R 599000 Ks2. LG 42 PQ 30 R 669000 Ks3. 32 LH 20 R LCD 429000 Ks4. 42 LH 20R CCD 699000 Ks (HD Ready)5. 42 LH 50YR 109000 Ks6. 47 LH 50 YR 1799000 Ks
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လိုသလိုပြောင်းလဲသုံးနိုင်တဲ့ ဖုန်စုပ်စက်လေး
တရုတ်နိုင်ငံလုပ် Jinke တံဆိပ် ဖုန်စုပ်စက်လေးဟာ ဖုန်များ ကိုစုပ်ယူနိုင်တဲ့အပြင် ဖုန်မှုန့်များကို မှုတ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်စုပ် စက်လေးရဲ့ ခေါင်းတံက အရှည်၊ အလတ်နဲ့ အသေး သုံးမျိုးပါတဲ့ အတွက် မိမိသုံးမယ့်အနေအထားနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ခေါင်း တံကို ပြောင်း လဲ တပ်ဆင်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်စုပ်ပိုက်တံရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ mini size အသေး၊ အကြီး လဲသုံးလို့ရတဲ့အတွက် ဘီရို တွေ ကြား၊ စားပွဲတွေ ကြားထဲက ဖုန်တွေကို စုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ အရွယ်အစားက သေးငယ်တဲ့အပြင် ပေါ့ပါးမှုလည်းရှိတဲ့အတွက် အခန်းကျဉ်းလေးတွေအတွက် ပိုပြီးသင့်တော်မှ ပါ။ 800 watt ဖြစ်ပြီး တစ်လုံးကို ကျပ်နှစ်သောင်းသုံးထောင် ဈေးရှိပါတယ်။ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနဲ့ အနော်ရထာ လမ်းထောင့်က Central Supermarket မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါ တယ်။
ဆွဲဆောင်မှု အအပြည့်နဲ့ Nokia Gold Arte
ဒီဟန်းဆက် ကိုယ်ထည်အရောင်နဲ့ ဒီဇိုင်းက မြင်တွေ့ရသူကို လိုချင်စဖွယ် ဖြစ်အောင် ပုံဖော်ပေးထားပါတယ်။ phonebook မှာ၁၀၀၀အထိ မှတ်ထား နိုင်တာလည်းထူးခြားပါတယ်။ ကင်မရာ က 3.15 megapixel ဖြစ်ပြီး Screen က နှစ်လက်မအရွယ် အစားပါ။ ဂိမ်းတွေ ပါတဲ့အပြင် bluetooth လည်း ပါတဲ့ အတွက် Data တွေကို Share လုပ်နိုင် ပါတယ်။ SMS, MMS နဲ့ EDGE တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုစနစ် သုံးထားပါ တယ်။ Memory က 1GB ပါ MP3, MP4 နဲ့ Micro USB OTG တို့ပါလို့ PC နဲ့ ချိတ်ဆက် ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ တစ်လုံးကို ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် ဈေးရှိပြီး DOCOMO မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါ တယ်။
BLACK BERRY Bold 9700 650000 Ks BLACK BERRY Curre 6920 360000 Ks LG Chocolate BL-20V 285000 Ks LG GD 510 220000 Ks SONY ERICCSON X2 710000 Ks SONY ERICCSON Satio 850000 Ks NOKIA X6 660000 Ks NOKIA N 900 620000 Ks NOKIA 2830 73000 Ks CDMA 800 Motorola K2 89000 Ks
Lenovo ရဲ့ A58 Think Centre PC ဟာ Branded ဖြစ်ပြီး Solid Capacitor Motherboardကိုသုံးထားလို့ အခြား Capacitor အမျိုးအစားတွေထက် သက်တမ်းခြောက်ဆလောက် ပိုပြီးခံပါတယ်။ ဆူညံသံမရှိဘဲ အပူထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်း သိသိ သာသာ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာထဲက Data တွေကို Memory Drive နဲ့ကူးလို့မရအောင် ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ စနစ် ပါဝင်တာကြောင့် Data လုံလုံခြုံခြုံ သိမ်းဆည်းထားလိုတဲ့ ဌာန တွေအတွက် ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။ UPS ကIntel Dual Core E5300 (2.6 GHz, 800 MHz) ပါ။Mobile GM 45 Chipset ကို သုံးထားပါ တယ်။RAMကတော့ 1GBDDR2 SD ဖြစ်ပြီး Graphic အတွက် Intel Accelerator X4500 ကိုသုံးထားပါတယ်။ HDD က 320 GBSATA ပါ။ Display အနေနဲ့ ၁၈ ဒသမ ၅ လက်မ မြင်ကွင်းကျယ် Lenovo ကို သုံးထားပါတယ်။ Internal Speaker ပါပြီး Built-in LAN လည်း တပ်ထားပါ တယ်။ ဈေးနှုန်းက ကျပ် လေးသိန်းခွဲဝန်း ကျင် (မော် နီ တာမပါ) ဖြစ်ပြီး KMD ဆိုင်တွေ မှာ ဝယ်လို့ရပါတယ်။
DVD ကြည့်လို့ရတဲ့အပြင် ကာရာအိုကေသီချင်းလေ့ကျင့်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ DVD ပလေယာ
DVD ကြည့်လို့ရတဲ့အပြင် ကာရာအိုကေသီချင်းလေ့ကျင့်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့DVD ပလေယာ
သြင်္ကန်ရေစိုခံ CDMA ဟန်းစက်
ကြိုးမဲ့ဇုံလေးတည်ဆောက်ဖို့ Prolinkု ရဲ့ Extender
လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်အသုံးများတဲ့ ကင်မရာသမားများအတွက် ှSony Cybershot DSCTX5
DELL Insprion 1564 လက်(ပ်)တော့